Chekwaa Crypto gị: iburu obere akpa ngwaike - Samoyedcoin
N'agbanyeghị ihe na-akwụghachi ụgwọ ma na-atọ ụtọ dị ka crypto nwere ike ịbụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị na-enweghị ihe egwu na-akụda mmụọ ya. Anyị niile nwere ọtụtụ nchegbu mgbe ị na-agagharị crypto, dị ka ịla n'iyi mkpụrụokwu mkpụrụ gị, iziga ego na adreesị na-ezighi ezi, ma ọ bụ nke kachasị njọ, obere akpa gị na-emebi emebi na ezuru crypto gị. Ọ bụ ezie na enwere ụzọ dị iche iche iji belata ihe egwu ndị a, otu n'ime omume kachasị mma ị nwere ike ịgbaso iji chekwaa crypto gị bụ iji obere akpa ngwaike. Akpa ngwaike, nke a makwaara dị ka "nchekwa oyi," na-enye gị ohere idobe crypto gị na-anọghị n'ịntanetị wee belata ihe ize ndụ nke ndị hackers ma ọ bụ ndị scammers ịnweta crypto gị.
Na nke a post, anyị ga-akọwa ihe kpọmkwem a ngwaike obere akpa, otú o si arụ ọrụ, ihe mere i kwesịrị iji ha, ebe ịchọta ha, na otu esi echekwa gị $SAMO na otu. Na-atụ anya ka ị pụọ na akụkọ a na nghọta ka mma nke ihe kpatara ị ga-eji chekwaa crypto gị na obere akpa ngwaike yana otu esi arụ ọrụ ahụ.
Kedu ihe bụ obere akpa ngwaike?
Tupu ịbanye n'ime ihe bụ obere akpa ngwaike, ọ dị mma ịmara na e nwere ụdị ụzọ abụọ ị nwere ike isi were chekwaa crypto gị: nchekwa ọkụ (online) na nchekwa oyi (anọghị n'ịntanetị).
A na-ejikọta obere akpa akpa na-ekpo ọkụ na ịntanetị (nchekwa na-ekpo ọkụ), dị na ngwaọrụ mkpanaka gị, kọmpụta, laptọọpụ, na ihe nchọgharị, dị ka Chrome. Ndị a bụ obere akpa ego kachasị ewu ewu eji echekwa crypto n'ihi na ọ dị mfe iji na ịnweta ha. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na njikọta oge niile na ịnweta ngwa ngwa na-adaba adaba, dị ka mmemme ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla nwere njikọ ịntanetị, ọ dị mfe ịnweta hackers.
Akpa ngwaike (nchekwa oyi) na-arụ ọrụ n'otu aka ahụ na obere akpa ọkụ; ha na-enye gị ohere ịchekwa, zipu, na ịnata akara gị. Ọzọkwa, ha nwere igodo ọha nke ha na igodo nzuzo. Enwere ike iche igodo ọha dị ka akaụntụ/aha njirimara gị, igodo nzuzo bụ paswọọdụ na obere akpa gị. Ndị ọzọ karịa obere akpa ngwaike ịbụ ihe anụ ahụ (na-adịkarị n'ụdị USB), nnukwu ọdịiche dị n'etiti obere akpa abụọ a bụ na obere akpa ngwaike ejikọtaghị na ịntanetị. Nke a pụtara na ihe dị n'ime akpa ego adịghị mfe na mwakpo ịntanetị. Ọbụlagodi mgbe ị jikọtara obere akpa ngwaike gị na ịntanetị iji zipu ma ọ bụ nata akara, a na-edobe igodo nzuzo nke wallet n'ịntanetị n'ihi na obere akpa ngwaike bụ ụdị nchekwa oyi na-ejikọghị na ịntanetị.
Ọ bụ ezie na obere akpa ngwaike dị mma maka ịchekwa crypto gị n'enweghị nsogbu, ịchekwa crypto gị na ngwaọrụ anụ ahụ na-emepe ụzọ gị nwere ike tufuo obere akpa gị, izu ohi, na ọbụna ibibi ya na ọdachi. Ọzọkwa, ịchekwa nnukwu ego nke crypto na ngwaọrụ anụ ahụ, dị ka Ledger, nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ kacha mma ị ga-esi. Dabere n'ụdị crypto ị nwere, ọ nwere ike bụrụ ihe ezi uche dị na ya ịchọpụta onye na-ahụ maka ọrụ na-eche ihe ize ndụ nke ịchekwa mkpụrụ ego gị mgbe ị na-enye mkpuchi na mkpụrụ ego ha na-echekwa. Maka ebumnuche ndị a, ọ bara uru ịchọgharị ụzọ nchekwa ndabere ọzọ iji chekwaa mkpụrụ ego gị - dị ka ịchekwa mkpụrụokwu mkpụrụ gị n'ime ụlọ akụ, ịnweta ngwaọrụ ndabere, na/ma ọ bụ iji onye na-ahụ maka ọrụ nchekwa.
Ozugbo ejikọrọ obere akpa gị, ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ ma nwee ike ịbanye ma kwado azụmahịa. Otu echiche na-ezighị ezi bụ na obere akpa ngwaike n'onwe ya "na-ejide" mkpụrụ ego ndị a. N'ezie, ọ na-ejikwa obere ego na-abanye na n'ime obere akpa gị site na ịchekwa igodo nzuzo gị. Ozugbo ejikọrọ na ịntanetị, ngwaọrụ ahụ na-enweta igodo nzuzo gị ka ị nwee ike izipu token na/ma ọ bụ melite itule nke mkpụrụ ego na obere akpa gị.
Gịnị mere i ji kwesị iji otu?
Nchekwa kwesịrị ịdị n'ihu na nke mbụ mgbe ị na-agagharị na webụ; crypto abụghị ihe ọzọ. Iji obere akpa ngwaike na-etinye gị n'ijikwa onye nwere ike ịnweta ego gị na mgbe. Dịka ọmụmaatụ, onye na-agba ọsọ ịntanetị enweghị ike ịnweta igodo nzuzo nke obere akpa gị iji zuru ego n'aka gị mgbe ị na-eji obere akpa ngwaike.
Naanị n'ihi na ị na-eji obere akpa ngwaike apụtaghị na ndị na-eme ihe ọjọọ nọ na mbara igwe anaghị egbochi gị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ejikọrọ obere akpa gị na ịntanetị, ị kwesịrị ịkpachara anya maka azụmahịa ndị ị na-abanye na weebụsaịtị ndị ị jikọtara na obere akpa gị. Na mgbakwunye, ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ihichapụ obere akpa mgbe ị na-eji obere akpa ngwaike, ị ka nwere ike ịtụfu ego ụfọdụ site na ijikọ obere akpa gị na mmemme ọjọọ.
Iji chekwaa, na-azụta obere akpa gị mgbe niile n'aka onye nrụpụta ngwaọrụ. Ejila azụta n'aka onye na-emekọrịta ihe, dị ka Amazon ma ọ bụ eBay. Site n'ime nke a, ị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke ịchekwa mkpụrụ ego gị na ngwaọrụ ngwaike nkwakọ ngwaahịa yana onye na-ere ahịa nke atọ na-eji igodo nzuzo nke obere akpa iji nweta ego gị.
Yabụ, kedu obere akpa ngwaike ị ga-eji? Anyị na-atụ aro ka ị nyochaa n'onwe gị uru na ọghọm nke obere akpa ọ bụla tupu ịme mkpebi nke gị. Agbanyeghị, obere akpa ngwaike abụọ kachasị ewu ewu bụ Trezor na Ledger.
Ihuenyo mmetụ agba.
Ihe owuwu ígwè.
Enweghị ngwa mkpanaka.
Ego 1800+ akwadoro.
Obere ngosi nha.
Ebe nchekwa data ahịa chere mmebi iwu ihu na 2020.
Mgbe ị na-eji obere akpa ngwaike gị, akụrụngwa kacha mma ga-abụ mgbe niile site na onye nrụpụta ngwaọrụ. N'ihe gbasara Ledger, ị ga-achọ ibudata ngwa ndị ọzọ. Otú ahụ ka ọ dịkwa Trezor. Ozugbo etinyere ya, ị nwere ike ịga n'ihu iji tinye obere akpa gị na obere akpa ọkụ nke nhọrọ gị. Dịka ọmụmaatụ, Phantom nwere nkuzi dị mfe ịgbaso nke enwere ike ịchọta Ebe a.
Mgbe ị na-agagharị crypto, ị ga-etinyerịrị nchekwa na mbụ. Enwere ọtụtụ ụzọ iji chekwaa crypto gị, mana ole na ole dị mfe, dị irè na nchekwa dị ka iji obere akpa ngwaike. Ugbu a ị ghọtara nke ọma ihe kpatara ngwaọrụ ndị a ji bụrụ akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ, ị kwesịrị ịma nke ọma ka enwere ike iji obere akpa ngwaike chekwaa mkpụrụ ego gị.